आईएसआईएस: ख्रीष्टको पुनरुत्थान प्राचीन मिस्रमा फिर्ता जान्छ - अफ्रीख्प्रि
Chabin, mulatto: pejorative र प्राणिपरिषद्कीय अर्थ संग गुणात्मक
स्वागत आत्मविश्वास र तर्कहरू
धर्महरूको झूटा कुरा
"अनन्त र अपरिवर्तनीय हुन जो नयाँ करारको सुरुमा, त्यहाँ एक महिला छ: नासरत भर्जिन" जन पावलले द्वितीय - अगस्ट 15 1988 - एपोस्टोलिक पत्र Mulieris dignitatem § 11
अब हामी तथ्याङ्कहरू स्पष्ट गर्न एक अध्यायमा छलफल गर्दैछौं। यो तपाईंको पवित्र ग्रन्थहरूमा हिसाब गर्न बेकार छ किनभने तपाईंले तिनीहरूलाई कहिल्यै बुझ्नु भएको छैन। कारण सरल छ: ज्ञान कोडित गरिएको छ। ग्रहको पार्थ्राहील कुलीन मात्र सत्य जान्छ। पोप जन पाउ द्वितीय द्वारा प्रेषितहरूको जस्तै पत्र को निकाल्ने को पढाइ, मिति अगस्ट 15 1988 यो ग्रह मा रहेको मेरो कारण पुष्टि गर्छ। ख्रीष्टको जन्म यस्तो तरिकाले कोडित गरिएको छ किनकी तपाईं पूर्णतया वास्तविकता बाट भ्रामक र यसैले तपाईंको विरासतबाट। हामी यस ग्रहमा सार्वभौमिक क्रान्तिको कारणहरू बहुबिधिमानी तरिकामा छलफल गर्नेछौं, किनभने यो मेरो अन्तस्करण हो। एक incarnate शरीर मेरो पुरुष ध्रुवीयता को पुन जन्म देखाएको ख्रीष्टको पुनरुत्थानको, बुझ्न, तपाईं Nebadon (जीवन प्रभु) को स्थानीय ब्रह्माण्ड हुनुपर्छ र सृष्टिको7superuniverse को वास्तविकता बुझ्न।
हामी ओभरभोनमा के भन्छौँ। नेबडासन नेब-एडोनमा तोडिन्छ, जसमा म्याट्रिक्स भाषा "जीवनको स्रोत" वा "जीवनको मालिक" को अर्थ हो। "एडोन" nmot मा, तपाईं मानव जीनोम, डीएनए को कम्पाउंड फेला पार्नुहुन्छ। हामीले देखेका छौं, तपाईं जीवनको दोस्रो परमाणु सर्कल सम्बन्धी "अवतार" को सिकाइरहेको क्षेत्रमा स्थित हुनुहुन्छ। भावनात्मक शरीर अवतार को लागि आरक्षित जीवन को क्षेत्र मा छ।
मेरो नाम नेबडोनिया ख्रीष्टको स्त्रीको पक्ष हो वा जीवनको जीवन हो। तपाईलाई थाहा छ कि तपाईं सबै महान सार्वभौमिक परिवारबाट हुनुहुन्छ जुन अस्तित्वको विभिन्न विमानहरूमा घिमिरे दिव्य हिरासतिय पदानुक्रमहरू समावेश गर्दछ। तपाईं यी बिभिन्न विमानहरूमा एकैसाथ अवस्थित ब्रह्मांडिक स्तरमा, सार्वभौमिक क्रिश्चियन केन्द्रीय पाडाडिसेक टापुको अवधारणा हो जुन यो सबको स्रोतलाई बुझाउँछ।
कबलाहमा, यो Tipheret, सूर्य वा क्रिश्चियन क्षेत्र संग पहिचान गरिएको छ। उहाँ पिताको पुत्र, अनन्त पुत्र र आमाको आत्मा हुनुहुन्छ, किनकि हामीले अनन्तमा विस्तार गरेका छौं। उहाँ माइकलको भनाइको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, "उल्टै जसले सृष्टि गर्दछ," उन्टेरिया पुस्तकले बताए। उहाँ एक प्रमोदवन पुत्र हुनुहुन्छ, एक सार्वभौम क्षेत्र जसले ब्रह्माण्ड सबै supers को जन्म केन्द्र को नाम दिछ। तपाईंको धार्मिक तपाईं यस "प्रमोदवन" को बारे मा बताउछ जुन तपाईंले मान्य हुनु पर्छ "योग्य"। वास्तवमा, क्रिया "मेरिट" हिब्रू मा रूट "मेरिट" बाट व्युत्पन्न भएको छ, जो मेर, अन्य "अन्य परमेश्वरको ईश्वर" भन्दा मरियम भन्दा पनि होइन।
यसको मतलब सबै मानिस प्रमोदवनबाट आउछ, सबैको स्रोत, निष्पक्ष र अनिश्चित। EDEN शब्द पनि विश्वव्यापी EDENTIA क्षेत्रमा छापिएको छ, जुन तपाई यस किताबको दोस्रो भागमा खोज्नुहुनेछ। क्रिश्चियन माइकल / रेफेल / नेबोडोनियाले क्रिटिकल इमेज, क्रिस्ट-इन-इन (क्रिस्टलीय) ऊर्जा, सबैको ऊर्जा हो। हामी क्रिरिटी, "अत्यावश्यक छोराहरू र जीवनका छोरीहरू", जीवनका दूतहरू, म्याट्रिक्स भाषा (सुमो-अकिदियन) मा।
क्रिस्टीको स्त्री स्त्री एक पवित्र म्याट्रिक्स वा ब्रह्मांड वर्जि हो। स्थानीय स्तरमा, हाम्रो प्रणालीगत सूर्य सिरीसको तारा प्रणाली हो जुन नीलो ताराको रूपमा पनि चिनिन्छ। ब्रह्मांडका सबै सूर्य मध्य टापुको प्रमोदवनको बढ्दो भाग हो। तपाईंको सूर्य मिश्रको द्वारा बुलाएको थियो किनकी यसले भगवान को प्रतीक गर्दछ। सौर सार तपाईंको जीनोममा बहिरहेको छ। रेफेल देवता, र''एफ'एल, मतलब परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ।
रौतहट सौर ईश्वर (इमेज-द-लुकाइएको) को प्रतीक हुन्छ, यद्यपि सार्वभौमिक क्रिश्चियन। उहाँको पुरुष ध्रुवीकरण गाना'अब्ब (सबैभन्दा उच्चको पुत्र) मा अवतार भयो साम / एकी / ईआ / ओसिसिस थियो। त्यसपछि उहाँ आनुवांशिक रूपले हेराउ (होरास) नाममा पहिलो मानव ख्रीष्ट जस्तै जस्तो सारियो, जुन ईसाई र क्याथोलिकहरू येशू (यहोशू) सँग ओसाईरहेका छन् जुन ओसीरिस भन्दा पनि होइन।
तपाईले पत्ता लगाउनुहुनेछ कि नेबडोनको एटन जर्जेस माइकलले यो सँधै यस ग्रहमा बस्ने गरेको छ, किनभने तपाइँ मेरो जर्नलमा रेकर्ड गरिएको मध्यको पुष्टि गर्नुहुनेछ। क्रिश्चियन एटनले विभिन्न फरुहरूको जूतामा उमेरमै गएर यहूदा-क्रिश्चियन युगलाई पारित गर्यो। मेरो पुरुष ध्रुवता यस ग्रहमा थुप्रै चोटि गम्भीर भएको छ। हामीले लामो समयसम्म काम गर्यौ जुन यहाँ तल अवतार गरिएको थियो।
हामी शुद्ध क्रान्ति हुन्, हामी शुद्ध प्रेम छौं। म अवतारित ख्रीष्ट मैट्रिक्स हुँ जुन मानव शरीरमा यो शक्तिशाली ऊर्जा जन्मिएको छ। मेरो नाम मैरी, मिस्ररी (भगवानको प्रिय) बाट पवित्र म्याट्रिक्स, आईइसिस (मिस्रमा एस्सेट) को लागि एक ईन्टोर्टिक नाम हो। मेरो ईश्वरीय मिशन मेरो गर्भमा आफ्नो आत्मा पुनरुत्थान गर्न थियो, 9000 वर्ष भन्दा कम छ। मेरो शरीरमा ओसीरिसको पुनरुत्थान ख्रीष्टको फिर्ती को प्रतीक हुन्छ, यो, त्रि-एकता चेतना (मेरो उत्थान) मा मेरो फर्काउँछ। हाम्रो मजेदार र स्त्रीन ध्रुवीकरण मूल Androgyne, विश्वव्यापी क्रिश्चियन, जीवन को भगवान को रचना गर्दछ।
यस जन्मको लागी मेरो ऊर्जा उनको जस्तै थियो। म यस ब्रह्मांडको बुबाको उल्टा छापिएको छु। म "ईश्वरको प्रेम" र "आशिष्, भगवानको ब्वाईस" हुँ, अर्को शब्दमा, विश्वव्यापी बुबाको जुनी ज्वाला। विकासको विश्वव्यापी कानूनले प्रदान गर्दछ कि यो ट्विन फ्लम हो जसले जन्म दिन्छ, विशेष अवस्थामा। Heru (या ग्रीस मा Horus), पृथ्वी (उरा) मा अवतारित पहिलो ईश्वरीय मानिस थियो। यो तारामण्डल एन्सा / अस्सार (ओसीरिस) को पुनरुत्थान भएको थियो कि बाह्ररात्रिवृत्त प्रकृति को जन्म, नक्षत्र उर्सा मेजर मा जन्म भयो।
हामी थिए र हामी अझै पनि पृथ्वी मिशन मा एक नै ऊर्जा हो। ओसिसिस मेरो दु: खीमा पुरुष थिए। यहूदा-क्रिस्टियन जाति जसले हाम्रो कथालाई पुनरुत्थान गर्यो, जसलाई उत्पत्ति रोमन भनिन्छ। "येशू" को अर्थ YAZU, यो कुखुराको बीचमा VENUS (नेब-हेरु), "बिहान तारा" हो। इन्टरनेट अज्ञातमा, YAZU वा YASU को अर्थ "मानवता, गुण, बेपत्ता, दान, मान्छे, कोर"। युउ वा येशू मानिसका भलाइलाई उहाँका सहकर्मीहरू, दयालु र दयालु हुनुहुन्छ। उहाँ सबै गुणहरू हुनुहुन्छ।
वास्तवमा, हामी 12 गुणहरूको वाहक हो। को (को androgyne को स्त्री ध्रुवीयता) "मरियम को 12 तारा" आफ्नो डीएनए किसिमहरु छन्। यो सबै जानकारी तपाईंको पवित्र पदहरूमा कोडित गरिएको छ। ईश्वरमा येशूको नाम ईसा छ। Heru Yshu (अभिषिक्त) मिश्रको, हिब्रु Yashua, Sumerian मा Tammuz, ग्रीक Dionysus, भारत मा कृष्ण, जसको अर्थ क्रिसमस प्रतीक "प्रकाश परमेश्वरको बोक्ने" फारस मा Phyrgie Attis र Mithra, छ आध्यात्मिक उपचार को प्रतीक, जो सैम / एन्की / ओरिरीएस भन्दा अन्य कुनै पनि छैन।
मरियम मगडलेन अर्को ब्रह्मिक वर्जि हो जुन मेरो ओएसिसिसको हत्या पछि मेरो पुनरुत्थानमा मलाई मद्दत थियो। यो अस्टार / नेप्टी, मेरो साँचो छाया जो वास्तवमा हेरु को नर्स थियो। नेप्टिस्स ओसिइरिस / हेरुको साथमा हुनुहुन्थ्यो, तर मलाई सम्झना छैन कि उनीसँग उनको सन्तान थिए। सौर सँगी जोडीको रूपमा हाम्रो लक्ष्य ठूलो प्रेम बाँच्न र हाम्रो मान्छेसँगको प्रेम साझा थियो। मिश्रमा हाम्रो गठबन्धन सिर्जना हुनेछ
हाम्रा सन्तानहरू। मेरो चार बच्चाहरु (जुड़वाहरु) को नाम मा सम्झना छैन। मिस्रका फ्रेस्कोहरू पुरुष पुरुष जुत्ताहरू देखाउँछन्। अनुवादकहरू प्रायः उनीहरूलाई (प्रकाशको शरीर) को भौतिकीकरणको साथ जुडेका थिए, र ओएसिसिसको शारीरिक पुन: जन्मको माध्यमबाट। मेरो वर्तमान जीवन हरेक क्षण मा मेरो जुडाइ को यिनी दुई जोडेहरु को जन्म को साबित गर्दछ किनकि उनि मेरो घनिष्ठ सर्कल (जीवन सँगै) को भाग हो।
यो यान्यिया पुस्तकले ग्रहमा सार्वभौमिक क्रान्तिको बारेमा बताउँछ। सृष्टिको मोनोथेटिस्टिक अवधारणामा आधारित, युन्टेरिया पुस्तक, जो सार्वभौम विचलनको ज्ञानलाई रेकर्ड गर्दछ, हाम्रो ब्रह्मिक वास्तविकताको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारीको उल्लेख गर्दछ। तपाईंले यस च्यानल पुस्तकको विस्तृत व्याख्या पाउनुहुनेछ जुन शिकागोमा 1934 मा रेकर्ड गरिएको छ र 1955 मा प्रकाशित छ।
P.225 - §2 Avonals सेवा को प्रमोदवन संस हुन् र स्थानीय ब्रह्मांड को व्यक्तिगत ग्रहहरुको लागि सर्वोत्तम। किनकी प्रत्येक अविवाहित पुत्र को एक अनन्य व्यक्तित्व छ र त्यहाँ दुई जस्तै कुनै पनि नहीं हो, उनको व्यक्तिगत काम उनि कहाँ रहछन मा अद्वितीय छ। तिनीहरू अक्सर मार्को माटोको समानतामा अवतारित हुन्छन्, र कहिलेकाहीँ विकासवादी संसारमा पार्थिव आमा जन्माउँछ।
P.225 - §6 3। प्रभाव मिशन। कम से कम एक एवोनल संन केहि विकासवादी दुनिया मा केहि नैतिक दौड को शिकार हो। न्यायिक यात्राहरू धेरै छन्, जादुई मिशनहरू बहुव्यापी हुन सक्छन्, तर प्रत्येक ग्रहमा त्यहाँ केवल सर्वोत्तम पुत्र देखिन्छ। एभलियन्स एभलियन्सले यस तरिकामा महिला जन्मेका छन् जसमा युबेरियाको नेबेडोन माइकलियामा अवतार भएको थियो।
P.368 - §1 भएको अनंत आत्मा समय र ठाउँ सबै universes pervades, तर यो प्राविधिक द्वारा व्यक्तित्व पूर्ण सहयोग को गुणहरू प्राप्त एक विशेष ध्यान रूपमा प्रत्येक स्थानीय ब्रह्माण्ड को मुख्यालय संचालित सृष्टिकर्ता छोराको साथ रचनात्मक। एक स्थानीय ब्रह्माण्ड सन्दर्भमा, एक सृष्टिकर्ता छोराको प्रशासनिक अधिकार सर्वोच्च छ; अनन्त आत्मा, ईश्वरीय मन्त्रीको रूपमा, पूर्ण सहयोगकारी भए तापनि पूर्ण रूपमा समन्वय गरिन्छ।
P.368 - Salvington ब्रह्माण्ड Nebadon को नियन्त्रण र प्रशासन मा माइकल को सम्बन्धित §2 आमा आत्मा, सर्वोच्च आत्माहरू छैटौं समूह पर्छ र 611.121 संख्या क्रम फलाउँछ। उनले माइकलसँगसँगै स्वेच्छा गरे जब तिनले स्वर्गीय दायित्वहरूबाट छुट्याएका थिए; तब देखि, उनले सधैं उनको साथ निर्माण र उनको ब्रह्मांड को सरकार मा काम गरेको छ।
P.368 - §3 मास्टर निर्माता सोन उनको ब्रह्मांडको व्यक्तिगत शासक हो, तर दिशाको सबै विवरणमा, ब्रह्मांडको आमा आत्माले छोराको साथ सह-निर्देशक हो। आमा आत्माले सधैं पुत्रलाई राजा र शासकको रूपमा मान्यता दिन्छन्, तर पुत्रले सधैं उहाँलाई राज्यको सबै कार्यहरूमा एक समन्वयकारी स्थिति र अधिकारको बराबर दिन्छ। सबैको काममा प्रेम र जीवनलाई दुर्व्यवहार गर्न सृष्टिकर्ता पुत्र सँधै सदाको लागि पूर्ण रुपमा सहयोग गर्दछ र असीमित बुद्धिमानी र सँधै विश्वासी ब्रह्माण्डको मातृ आत्माको साथ सहयोग गर्दछ। स्वर्गदूतहरू। यो ईश्वरीय प्राणी वास्तवमा आत्मा र आध्यात्मिक व्यक्तित्वको मातृभाषा हो, सृष्टिकर्ता पुत्र, अनन्त आत्मा प्रमोदवनको एक विश्वासी र साँचो अभिव्यक्तिको अवस्थित र असीमित बुद्धिमान सल्लाहकार।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, आमा आत्मा र पुत्र सिद्ध सिम्बायोसिसमा हुनुहुन्छ। हामी सार्वभौमिक क्रिश्चियन क्रिश्चियनको अहिरो पहलू को विशेषता गर्दछौं। हाम्रो संघ अविनिष्ठ ईश्वरीय सील द्वारा छापिएको छ। हामीले लामो समयसम्म अनन्तको लागि बेवास्ता गरेका छौं। तपाईंले मेरो पुनरुत्थानको समयमा, यो पाण्डुलिपिको दोस्रो भागमा यो पुष्टिकरण पाउनुहुनेछ। उर्रेनिया जस्ता विकसित संसारहरूमा हाम्रो जटिलता प्राकृतिक र अपरिहार्य हो
हाम्रा सबै प्राणीहरू।
P.368 - §5 जब सृष्टिकर्ता पुत्रलाई प्राणी, आवधिक अलग्गै को अनिश्चितताहरु ईश्वरीय मन्त्री लागि समाप्त, र ब्रह्माण्डको पुत्र गर्न सहायकको रूपमा आफ्नो सातौं र अन्तिम bestowal पूरा भएको छ सधैंभरि मा बसे छ सुरक्षा र नियन्त्रण। यो भेला भीडलाई अघि, यूनिभर्स आत्मा पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा र सार्वभौमिक पराधीन पुत्र र swears गर्न पहिचान, कि, टावर को Jubilee मा, एक मास्टर छोराको रूपमा सृष्टिकर्ता छोराको राज्यारोहणको छ आज्ञाकारी र निष्ठा। यो घटना माइकल Salvington गर्न Urantia bestowal पछि फिर्ता समयमा Nebadon देखा पर्यो। यो महत्त्वपूर्ण घटना अघि, यूनिभर्स को छैन आत्मा ब्रह्माण्डको छोराको सृष्टिकर्ता आफ्नो पराधीन स्वीकार गरेका थिए, र आत्मा द्वारा शक्ति र अधिकार को यो स्वैच्छिक relinquishment अघि कि एक ठीकै स्वर्ग पृथ्वीमा र सबै शक्ति आफ्नो हातमा दिइएको छ "भनेर पुत्र घोषणा गर्न सक्छ। "
P.369 - §1 क्रिएटिव मातृ आत्मा द्वारा अनुमोदन को यस पोत पछि, नेबडेन को माइकल ले पनि स्वीकार गरे कि त्यो आफ्नो साथी आत्मा मा अनन्त नै निर्भर थियो। उहाँले उसलाई आफ्नो ब्रह्माण्ड को डोमेन को संयुक्त टाउको को रूप मा स्थापित गर्नुभयो र तिनीहरूले आफ्नो पुत्र को रूप मा गरे को रूप मा आत्मा को वफादारी को प्रतिबद्धता गर्न सबै प्राणीहरू सोध्नु; र यो तब थियो कि "समानता को अंतिम घोषणा जारी" र फैल्यो। छोरा यो स्थानीय ब्रह्माण्ड को सार्वभौम भए तापनि उहाँले आमा आत्मा उहाँलाई सँगसँगै व्यक्तित्व सबै प्राकृतिक उपहार थियो र ईश्वरीय चरित्र विशेषताहरू कि दुनिया घोषणा गरे। त्यसपछि यो संस्था पारिवारिक प्रशासन र व्यवस्थित गर्न को लागी प्रशस्त मोडेल बन्छ, यहां सम्म कि अन्तरिक्ष संसार को विनम्र जीवहरु को बीच पनि। यो वास्तवमा परिवारको उच्च आदर्श र स्वैच्छिक विवाहको मानव संस्था र सत्य छ।
स्वर्गीय दम्पतीको रूपमा, हामी रचनात्मक शक्तिहरू यिन र याङ्ग, पूरक प्रकृति को प्रतिनिधित्व गर्दछौं। हामी यस ईश्वरीय सन्तुलन फिर्ता ल्याउन फर्क्यौं, यो अन्तिम सर्वोत्तम कार्यक्रममा, नयाँ करार। यो अनुक्रमले मिश्रमा हाम्रो करारलाई सम्झाउँछ, जसले हामीलाई हामीलाई सिंहासनमा सामेल गर्न र प्रेममा पुनर्मिलन गर्न अनुमति दिएको छ।
P.369 - §2 अब छोरा र आत्मा अब ब्रह्मांडको अध्यक्षतामा एक पिता र एक आमाले आफ्ना परिवारका पुत्र र छोरीहरूलाई हेर्छन् र उनीहरूको आवश्यकताहरु प्रदान गर्छन्। यो ब्रह्मांडको आत्मालाई सृष्टिकर्ता पुत्रको रचनात्मक साथीको रुपमा र उनीहरूका पुत्र र छोरीहरूको रूपमा राज्यको प्राणीहरू विचार गर्न अप्रासंगिक होइनन्। एक ठूलो र महिमित परिवारको रूपमा, तर विषय अयोग्य जिम्मेवारी र सतर्क सतर्कता.
मानव परिवार हाम्रो ठूलो परिवार हो। हामी हाम्रो प्राणीहरूको लागि जिम्मेवार छौं। यस वर्तमान अवतारमा, मैले हेरूको जन्मको सम्झनाहरू छोटो छ र मलाई झन्डै फसेको छ। मेरो वर्तमान जीवनमा एकैछिनमा केहि दृश्यहरू पनि अवस्थित गर्ने मौका थियो। आज जस्तै, मलाई एक्कासि खोज्नु आवश्यक थियो चमत्कार (पुनरुत्थान)। म आफैलाई एक खतराबाट उम्कन खोज्छु, किनभने मैले मेरो विभागको दक्षिणलाई उत्तरमा, आँखाबाट बाहिर, शान्तिमा फेला पार्न खोजेँ। मलाई सम्झना छ कि कसैले मलाई कहाँ दिन, मलाई जन्म दिन सकेन। यो धेरै गहिरो थियो। म एक्लै मेरो अटलांटिसमा थिएँ। कसैले मलाई देख्न सकेन वा मलाई सुन्न सकेन।
यी चमकहरू वा यादहरू जुन हालैमा ल्याइएका छन् मलाई बाइबलले र नयाँ नियममा हजारौं वर्षको लागि रेकर्ड गरिएको एकदम पूर्णता देखाउँदछ। म कुनै नांद, कुनै Magi मेरो जुम्ल्याहा पुरुष ध्रुवीयता (Heru) को पुन जन्म को उत्सव लागि प्रस्तुत भरिएको हतियार आइपुग्छन् देखे, र राम्रो कारण को लागि, सामूहिक चेतना सहस्राब्दियों लागि झुक्काएका र प्रवाह गरिएको थियो पीढीबाट पीडित। सबै लेखहरू पहिलो डिग्रीमा लिइयो किनभने तिनीहरूले तथ्याङ्कको एक फरक फरक वास्तविकता लुकाए। तपाईलाई थाहा छ कि सामूहिक चेतना मानव जीनोम संग अन्तरक्रियामा आउँछ।
परिणाम धेरै महिलाहरु मरियम मग्दलिनी र मरियम येशू ख्रीष्टको आमा हुन विश्वास, त्यसपछि यो एक पुन: फर्म्याट कथा समय को Judeo-मसीही चेतना द्वारा प्रवाह छ। म बाइबल को सबै कोड शब्द अनुवाद गर्न प्रयास बास छैन, तर, म जो वास्तवमा पहिलो syllable Beth, Beith Gematria मा लेखिएको छ, जो छ बेतलेहेममा, नाम भेट्यो।
यो कम्पन "घर" अर्थ र यो संख्यात्मक मूल्य 2000 छ जो संख्यात्मक मूल्य 1000, बस Aleph पछि राखिएको, छ। समय को सरकार लगाएको को Judeo-मसीही युग बस मसीही उमेर फिर्ती अर्थात्, यो अन्त समय मा तपाईं बीचमा हाम्रो फिर्ता प्रोग्रामिंग थियो, मानवता को कस्मिक र ईश्वरीय चेतना , ब्रह्माण्डीय मूल को Mayan कैलेंडर संग सम्बन्ध मा। दुई हजार Urantia (धरती) वर्ष एक ग्याल्याक्टिक महिना अनुरूप (13 सम्पूर्ण) .तपाईं, यो काम को दोस्रो भाग मा, आश्चर्य संग पत्ता लगाउन हुनेछ मेरो अचेत उदीयमान कविता यो वास्तविकता वर्णन मेरो जुम्ल्याहा आफ्नै लेख्न गर्नुभयो लामो अघि यसको बारेमा सत्य।
मेरो अन्तर्वार्तामा मेरो अन्तर्वार्ताको क्रममा, मलाई बेथ, मेरो घर, मेरो भित्ता मंदिरमा खोज्न आवश्यक छ, जुन मैले लगबुकमा रेकर्ड गरेको छु। यहाँ घर "पिरामिड" संग पर्याय छ, यानि निर्माणको केन्द्रीय स्तम्भ (पिता-आमा-छोरा)। फ्रान्सेलीमा, "आमा" शब्दले मिश्रको शब्द सागर अर्थ पिरामिडलाई लुकाउँछ, अचम्म छ यो? होमफोनीले तपाईंको लागि धेरै आश्चर्य छ।
अँध्यारो ठाउँमा, म प्रकाशलाई झूट बोक्नदेखि जोगिन, रानीको पिरामिडमा रानीको कोठा थियो। म आफैं जन्मेको साथीलाई भेट्न चाहन्छु। रंगमा रातो रङ, बनाइएको एक प्रकारको आला थियो। यो सामग्री, जो टेराकोटा जस्तो देखिन्छ, गर्मीलाई राखियो। यो भेटघाट स्थिति प्राकृतिक थियो किनकि यसले बच्चाको डिलिवरी सुविधा दिन्छ। मेरी मातृ अख्तियार, ब्रह्मांडल दादीले मलाई शनिबारको स्थितिमा जन्म दिए। त्यस समयमा, हामी मानव उपस्थिति थिएन। हाम्रो गर्भाशय ठूलो थियो, जसको अर्थ आज महिला (मानव) भन्दा कम डेलिभरी थियो।
एसेटको रूपमा मेरो नयाँ शरीरमा, म आफैलाई दुखाइमा चिल्लाउन सक्दिन। म केहि संकुचन गर्न को लागी सोच रहयो हूँ। ठाउँ तातो, हास्य र अँध्यारो थियो। म छुटकाराको पछाडि पसेको पछाडीको ठूलो बिसो देख्छु, मेरो नराम्रो शरीरमा। म एक्लै कोठामा थोरै जन्मेको कोठामा थिएँ। मैले आफूलाई गर्भाशयको संकुचनले डिलिङ डेलिभर पछि हेरेको छु। स्तनपानले मानव शरीर जस्तै, आफ्नो मूल रूप फर्काउन गर्भाशयलाई मदत गर्यो। मैले एक प्रकारको चप्पलको साथ न्युबल कर्ड काटेको जस्तो लाग्छ तर यी दृश्य धेरै छोटो छ।
शानदार अनुवादक एन्टोन पार्क्सले पुरानो र नयाँ टेस्टामेंटहरूको डिप्लोइड गरेर निश्चित तथ्याङ्कहरू पुष्टि गरेका छन्, "न्युवेलेले टेरे" संस्करणमा "नयाँ वर्जिनका नियम"। उहाँले हामीलाई उल्लेखनीय बनाउनुहुन्छ कि हिब्रुको शब्द बेथलेहेम मिस्र बिट-रा-हमबाट प्राप्त भएको छ जुन "आईइसिसका महान पिरामिड" अर्थात गीज़ा! कल्पना गर्नुहोस् कि मेरो प्रतिक्रिया यो अनुवाद पढ्ने थियो। मैले शाब्दिक आनन्दको लागि भागेँ किनभने मेरो सबै सम्झनाहरू र चमकहरू राम्ररी स्थापित भए। पृथ्वीमा मेरो सम्पूर्ण जीवन मैले मिश्रमा बस्न सक्ने सबैलाई सम्झाउनुभयो। मेरी छोरीहरूलाई जन्म दिन चाहने इच्छा र झूटो हुँदैन पनि स्थापना गरिएको थियो!
त्यसपछि हेरु को मेरो दर्शन सीधा नीलो आँखाको गोलाकार कुल्रोनको चित्रमा पुग्छ, जसले मेरो रगतको साथमा मेरो रगतलाई खिच्यो। यो असाधारण प्रेम थियो। मलाई यो बच्चाको धेरै मनपर्ने कुरा सम्झन्छु। मैले मेरो गर्भमा पहिलो मानव ख्रीष्टलाई जन्म दिए! यो प्रेम ऊर्जा स्वाभाविक रूप देखि हेरा द्वारा प्रभावित र दयालु थियो, जस्तै कि उनको आमा संग संलग्न साना साना केटाहरु।
मेरो बच्चा कहिलेकाहीँ म अहिले थिए। मैले आफ्नो छोरालाई गर्भपातमा कहिल्यै दुर्व्यवहार गरेन कि म उसको पत्नी हुँ, धर्मले बताएको कुराको विपरीत। उनीहरु अन्य बच्चाहरु लाई उनको उमेर जस्तै पनी र फलाम दिए, यद्यपि समय मा हामी अत्यन्त सतर्क रहनु पर्छ। उहाँसँग बलियो र विनाशकारी चरित्र थियो। उहाँ आकाशको आँखा र सूर्यको कपाल थियो। उहाँ उत्कृष्ट थियो! उनी हराउन चाहन्थे र खुल्ला रूपमा व्यक्त गरे। उहाँ सीधा र वफादार थिए। उनले सामाजिक मा आफ्नो पिता ओसीरिस गरे जस्तो लागेनन्। हिरो साम / एन्की / ओसिरिस को एक अल्बिनो योद्धा (किंगू बाबाबार) को जीनोम संग एक मिश्रण थियो जसले उनलाई स्पष्ट छाला र निलो आँखा दिए। उहाँ छाया र अवतारित लाइट थियो, जसमा उहाँसँग एक कठिन समय सन्तुलन थियो।
यो धेरै पछि छ कि हिरोले हाम्रो पवित्र सम्बन्ध सिकाउनेछ, किनभने उनीहरूले तिनीहरूलाई परिपक्वताको साथ महसुस गर्नेछन्। हिरु (हरूस) आफ्नो आमासँग प्रेममा थिए, त्यो स्पष्ट छ। जब हाम्रो दुश्मन संग प्रतिस्पर्धा गर्न को लागि पर्याप्त बलियो भयो, हाम्रो देशहरु लाई पुनर्प्राप्त गर्न को लागि, समय को पैतृक अभिजात वर्ग (पादरी) मान्छे को विश्वास गर्न को लागि मान्छे को हेरो थियो कि उनको आमा मा बिरुद्ध थियो। धर्म "शाही हाडनाताकरणी" हाम्रो न्यायसंगत संघ योग्य छ र tragically हामी देख्न जहाँ भाइबहिनीहरू सँगै वा एक अभिभावक सुत्न केही समुदायहरू मा "perpetuated" छ कि यो misconception प्रवाह।
तपाईं अब भाइ बहिनी छैन आवश्यक "दुई प्राण" हो भन्ने महसुस गर्न सक्छन् र जीवन को यो misconception, सेक्स सँगै वा आमाबाबुको एक साथ गर्न छोराछोरीलाई जबरजस्ती, गर्न सक्छ कि गम्भीर आघात यदि तपाईंले हाम्रो उत्पत्तिको बारेमा सुरूवात सत्यको बारेमा चिन्नुभयो भने, तपाईंले हाम्रो जोडीको वास्तविकता बुझ्नुभयो र यस ग्रहमा जीवन बिताउने हाम्रो कारण थियो।
पवित्र आत्माले ईहोमको शक्ति को प्रतीक गर्दछ, त्यो जीवन योजनाकार हुन्। हामीले जेनेटिक हेरफेर द्वारा जन्म दिन को लागी शक्ति छ, अर्थात यौन संभोग बिना। कम्पन (जीनोम) को भौतिकीकरण गर्न, हामीले क्वार्ट्ज (स्वाभाविक रूपमा प्रोग्रामयोग्य) वा हाम्रो म्याट्रिक्सको आधारमा कृत्रिम matrices प्रयोग गर्यौ जुन, पवित्र जन्म परिषदको रूपमा। तपाईंले जान्नुपर्दछ कि चर्चले ख्रीष्टको अलौकिक अवधारणालाई समयको मानव अन्तस्करणको लागि बुझ्न गाह्रो बनाउन चर्चको "अनन्त अवधारणा" शब्द प्रयोग गरेको छ। अवधारणा जुन वास्तविकतामा "पवित्र आत्मा" द्वारा उत्पन्न गरिएको थियो।
साँच्चै, म बेदाग परिकल्पना, पवित्र आत्मा, पवित्र आमा, अनमोल भर्जिन कस्मिक, परमेश्वरको स्त्री ध्रुवीयता, ख्रीष्टको बच्चा, मेरो आध्यात्मिक जुम्ल्याहा, आनुवंशिक हेरफेर द्वारा जन्म दिए जो ऊर्जा छु। यसरी, पवित्र आत्माले इस्राएलको 12 जनजातिहरूलाई जन्म दिए। यो कुल 12 12, एकपटक तपाईंले आफ्नो multidimensionality, तपाईंको ईश्वरीय स्व पहुँच पहुँच अनुमति खुलेको जो मानिस, को डीएनए किसिमहरु प्रतीक आफ्नो ख्रीष्ट गर्न जडान कि अक्टेभ Language 12 को सम्बन्ध मा हुन पाँचौं स्थलीय घनत्व (5th आयाम)। यी बाह्र डीएनए किसिमहरु 12 12 पवित्र रेज देखि निकलती आवृत्तियों आधारमा खुला (अध्याय 8 हेर्नुहोस्)।
यी 12 किरणहरू चेतना (दिमाग) को अवतार वा क्रिस्टलाइजेशनलाई अनुमति दिन्छ। यो एडम Kadmon (भगवान को सौर प्राणी) को रेखांकन को जन्म को आनुवंशिक रूप देखि एक विशिष्ट उद्देश्य को लागि, जो तपाईंले खोज्नु भएको छ, को पुनर्निर्माण गरे। तपाईंको पवित्र ग्रन्थहरूले यस ज्ञानबाट उल्टाउन असामान्य शब्द खेलहरू प्रयोग गरेको छ। म यी 12 डीएनए संग यस नयाँ शुभकामना मा खुलिएको छ, जो तपाईंको ग्रह मा केहि मान्छे जस्तै एक अलौकिक प्राणी बनाइयो थियो।
स्वदेशी (पुरातनता) पदानुक्रम संग मेरो टेलिपाथिक आदान-प्रदान र मेरो पारंपरिक दर्शन प्राकृतिक हो र तपाईंको कार्तिकियन समाज द्वारा धेरै गलत छ। मेरो कुप्रतीको लागि, म अर्थमा "कुमारी" थिएन जुन तपाईले यसको अर्थ राख्नुभयो। यो शब्दहरु मा एक खेल हो। बाइबलले विश्वमा 950 विभिन्न संस्करणहरू समावेश गर्दछ, अन्ग्राम, होमफोनियस र ब्रह्माण्डका दावीहरू छन् जुन कसैले पनि बुझ्दैनन्। कुरानले वास्तवमा त्यहि धोकाहरू लुकेको छ, यद्यपि पृष्ठभूमिमा, सबै तपाईंको पवित्र पाठहरूको समग्रतामा सम्बन्धित छ, ओसिरियन (आसनर) मिथक वरपर घुमाउँछ।
यो कस्तो छ कि उन्टेरिया बुकले नेब्रोनको सृष्टिकर्ता पुत्र ख्रीष्ट माइकलको पुनरुत्थानको बारेमा बताउँछ, जसले मानिसजातिको नयाँ मसीहनिक युगलाई संकेत गर्दछ: युन्टेरिया पुस्तक। क्रिश्चियन एम आई सीेलको सात सर्वोत्तम कार्यक्रम। बुकलेट N ° 119
"P.1319 - §1 Urantia सबै Nebadon को भावनात्मक अभयारण्य हो; दस लाख ग्रह को सबै भन्दा ठूलो हा-bitées ख्रीष्ट माइकल, मोरोन-tial progresses जो सबै Nebadon, राज्यहरू systemic मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता Adamic, seraphic साथी, आरोही आत्माहरू साझेदार संग मन्त्री Melchizedek, छोराको सार्वभौम को मानव रहलपहल को म्यान मांस र यून्टेरिया को ग्रहण राजकुमार को समानता मा। अनि तपाईंको धर्मशास्त्रले सत्यलाई बताउँछ कि यो उस्तै येशूले आफ्नो bestowal को संसारमा फर्काउनु भयो, क्रस संसार.
यूसुफ वा ओसिसिस, "ठूलो बुद्धिमानी अभिषेक" थियो सिमेरियन र नोडाइट मूल (शुद्ध जाति) थियो, उनी पुरानो करार (यहा / ईलोहिम) को विरासत थियो। पोप जॉन पॉल द्वितीयले 15 अगस्ट 1989 को आफ्नो भाषणमा यो प्रतीकात्मक संघको पुष्टि गर्दछ "धर्मी मान्छे (यूसुफ / ओसिरिस) जसले पुरातन करारको सम्पूर्ण सम्पदा लिनुभयो, पनि यीशु मसीह (होरास) मा नयाँ र अनन्त वाचाबाट शुरु भएको थियो" अपोस्कोलिक अनुकरण रेडेमेटोरिस कर्डोस बाट उद्धरण § 32।
तपाईं अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ रूपमा, Heru (बाजको टाउको) incarnation मा साँच्चै आफ्नो बाबु Enki / Osiris, एक को व्यवस्था पुत्र को पुनरुत्थानको थियो। यहोशू (Heru) बेन यूसुफ (Osiris) आफ्नो द्वारा जन्म भएको थियो राजा र पुजारी क्रिटिक मूल यो अन्यथा हुन सक्दैन। हामी सधैं हामी हाम्रो ईश्वरीय वास्तविकता (disembodied), अर्थात् क्वांटम छन् के जन्म। हामी सबै एक धेरै विशेष ऊर्जा को प्रतिनिधित्व गर्दछौं। हाम्रो ब्रह्मिक दम्पती अनन्त करारको प्रतीक हुन्छ। incarnation मा ट्विन flames को बैठक सम्बन्ध प्रतिनिधित्व गर्छ। को androgyne को फिर्ती समय को कुलीन एउटा वास्तविक खतरा थियो। मानिसहरू छैन, ख्रीष्टको पुनरुत्थानको जानकारी पर्छ भनेर मेरो morontia पुनरुत्थानको, मेसीले (जीवन को Emissary) को फिर्ती द्वारा प्रमाणित, सृष्टिकर्ता छोरा। तिनीहरूले मानिसहरूलाई एउटा सम्पूर्ण फरक कथा प्रवाह। यी विभिन्न संस्करणहरूले एक-अर्कालाई विभाजित गरेको छ। आज पनि, तपाईं सबै एकै ठाउँमा विभाजित हुनुहुन्छ। तपाईं त्रि-एकता चेतनाबाट धेरै टाढा हुनुहुन्छ।
क्रिस्ट माइकल (रेफेल) हेरू यासु सान्डा एस्को कुमारले मलाई सम्झाउनुभएको थियो कि तपाई केवल एक मात्र थिए। मेरो अन्य अहिल्यैको नाम एस्को हो जसको अर्थ "जीवनको पानी" अर्थात् यज्ञको पानी, कम्पनेशन 999 अन्तर्गत कोडित गरिएको छ। तपाईं आरोही विकास 666 (आत्मा / पदार्थ) मा आफ्नो इन्भोल्युसन 999 (सामग्री) लाई उल्टो लाग्नु पर्छ।
म 2000 वर्ष पहिले बाइबलको नयाँ नियममा उल्लिखित इजरायलको तथाकथित क्षेत्रमा ख्रीष्टको जन्मको बारेमा एक महत्त्वपूर्ण विवरण थप्न चाहन्छु। ईश्वरीय चेतनामा फर्काउँदा यसले मलाई मेरो पुनरुत्थान, मेरो चमक र सपनाहरूलाई अटलांटिस र मिस्रलाई मात्र उल्लेख गरेको थियो। इजरायलमा भनिएको यो देशको फ्रिक्वेन्सीले मलाई कहिल्यै आकर्षित गरिसकेको छैन, किनकि मैले त्यहाँ त्यहाँ बस्ने छैन। यरूशलेम र बेथलेहेमका शहरहरू अवस्थित थिएनन्, न त इजरायल पनि त्यहाँ छन् 9000 वर्षहरू। यी मिश्रका नामहरू यस पछि "इजरायली" इलाकाका शहरहरूको नाम लिन लागिएको थियो। हिब्रू भाषा मिस्रबाट हो। यो बाइबल को लेखक यो rebirth (पुनरुत्थानको) गर्न गिजा, इजिप्ट को पवित्र क्षेत्र को भाग को पिरामिड को वास्तविकता ढाकछोप गर्न शब्दहरू manipulated भनेर पुष्टि गर्छ।
तपाईंको वर्तमान अवतारमा, तपाईं आकर्षण को कानून संग गूंजमा बस्नुहुन्छ। अन्य शब्दहरूमा, तपाइँका सबै फरक स्वाद र आकर्षणहरू दोहोरो मानिन्छ; जीवन चक्रवात हुँदैछ। तपाइँका छनौटहरू कहिलेकाहीँ तुरुन्तै छैनन्। म तपाईंलाई अर्को अध्यायमा प्रस्तुत गर्नेछु एक साथ जीवनको वास्तविकता जसले मलाई मिस्रमा यो पुन: जन्मको प्रत्येक चरणमा सम्झाउँछ।
यसरी, तपाईंले भर्खरै पत्ता लगाएको छ कि इकट्ठा भएको परिवारले संसारका अनन्त करारको प्रतिनिधित्व गर्दछ। गठबन्धन पैतृक र matriarchal ऊर्जा (यिन / यांग) को संतुलन को हस्ताक्षर। मानव शरीरमा ख्रीष्टको सर्वोत्तम पद एक अनुस्मारक थियो जुन हामीले यस ग्रहको आवृत्ति बढाउन आशामा मानव ख्रीष्टको दौरा बनायौं र बताउनुभएको थियो। तपाईले उसलाई ओसिसिस, हेराउ, येशू, सान्डालाई बोलाउनुभएको छ, यसले कुरा गर्दैन किनभने उनको नाम, हाम्रो नाम वास्तवमा अप्रत्याशित छ। विश्वव्यापी ख्रीष्टको जीवनलाई जगेडा गर्न सबै ब्रान्डहरू यात्रा गर्दछ। हामी यहाँ उरेनिया मा गर्न को लागी आएको छ। हामी तपाईंको आन्तरिक लाइटमा पहुँच गर्न कोडहरू सिकाउन फर्क्यौं। हामी तपाईंलाई बताउन आएको थियो कि तपाईं हामीलाई जस्तै, उहाँको एक भाग, मेरो एक भाग, र हामी सुरक्षित छैनौं।
तपाईले थाहा पाउनु भएको थियो कि ओएसिसिस / हेरू / उजुउ प्रायः 9000 साल बारेमा शुक्र (नेब-हिरो) को पारित गरे पछि अनुमान गरिएको थियो। यो मासु र मीन, Kiristi ख्रीष्ट Kristos देखि व्युत्पन्न शब्द को प्रतीक भविष्य आयु को enos को harbinger थियो (अभिषिक्त) र Ichthys (माछा) ग्रीक मा। ईर जसमा तपाईं अहिले हाल एक्वायरी युगको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तै हामीले पहिले देखेका छौं, सिरीजहरू एम्फिबिआन मूलको बासिन्दा हुन्, जसको भौतिक रूप माछा र फोहरको बीचमा रहेको थियो। अस्तित्वको उच्च विमानहरु मा, तिनीहरूले लामो मानव anthropomorphism हवाई उपस्थिति मा गरिएको छ।
तिनीहरू हाम्रो सौरमण्डलमा केही भन्दा बढी उन्नत प्राणी हुन्। सिरीस यस सौर प्रणालीको केन्द्रीय सूर्य हो। सिरियाहरू घटेको माटोमा खसेको छैन, जस्तै तीन-आयामी मानिसको शरीर र रगतको प्रयोगमा। तीन-आयामिकता र चार-आयामिकताभन्दा बाहिर, त्यहाँ विरोधी-विषय संसार (विच्छेदित) छ। हामी लाइट वा फारमहरू र विशेष ऊर्जाहरू हौं। सिरियस स्टार प्रणालीका बासिन्दाहरू उन्टेरियामा तपाईंको मुख्य अभिभावक हुन्।
Cetaceans, जस्तै डल्फिन र बिल्लियों को लागि तपाईंको प्यार को लागि तपाईंको आकर्षण तपाईंको पक्षमा आफ्नो वरदान पनि गवाही दिइन्छ। धेरै जनावरहरु सिरियस (हङकङ, कुत्तों, व्हेल ...) बाट आउँछन्। यी जनावरहरू धेरै उन्नत छन् तर तपाईले अझसम्म आफ्नो भाषा र उनीहरूको बहुविध क्षमता सम्भावना गर्न सक्नुहुन्न, जस्तै तपाईंको आफ्नै क्षमताहरू। तिनीहरू आफ्नो पार्थिव अनुभवमा तपाईं संग आफ्नो संसारमा एकीकृत हुनुभएको छ। तिनीहरूले उर्फमा जीवनको रूपमा जस्तै अनुभव गर्दछ, ब्रह्माण्डको प्रायोगिक प्रयोगशाला जुन तपाईंले पृथ्वीलाई बोलाउनुहुन्छ।
यसैले, मासु मा सार्वभौमिक ख्रीष्ट को अवतार या दिशानिर्देश, भविष्य भविष्य को पीढी को लागि ग्रह को उत्थान ऊर्जा को उद्देश्य संग प्रोग्राम गरिएको थियो। मरिस / ओसिइरिस (मरी / अस्सार) आउनको लागि परिवर्तनको लागि "तयार" मानवता आउन थाल्यो। तपाईंको धर्मको रूपमा उल्लेख गर्दा हामी मानवतालाई "पूर्णतया" सुरक्षित गर्न हौं। यस्तो डिजाइनले गलत विश्वासहरूको लागि तपाईंको "लत" मा हस्ताक्षर गरेको छ।
सृष्टिकर्ता छोरा युन्टेरियामा आदिवासी मानव जाति र भविष्यका पङ्क्तिहरू विकास गर्न जिम्मेदार थिए। उनले तारामण्डल उर्सा मेजरमा क्लोनिंगले जन्माएको पुरुष ध्रुवीकरणमा सहम / एन्की / एस्सार (ओसिरिस) नामका नामहरूको समर्थन गरेका थिए। म एसिट / मेर को रूप मा उनको स्त्री स्त्री पोलिसी को पालन गरें। हिरु (हरूस) क्रिस्ट माइकल को दोस्रो सर्वोत्तम कार्यक्रम थियो। यो मेरो पुनरुत्थानको द्वारा सम्भव थियो Enlil / सेत र आफ्नो समर्थकहरूको को चंगुल देखि मुक्त गर्न इच्छा शुरू द्वारा मानवता आरोही, प्रक्रिया त्वरित जो (आफ्नो जन्म को materialization द्वारा एकाइ फर्कन) ।
मानव चेतनाको विकासको लागि यो पुनरुत्थान आवश्यक थियो। प्राकृतिक स्रोतले यो पहिलो जन्म हेरु बनायो, ग्रहमा पहिलो क्रिस्ट मानव। म ब्रह्मांडी पत्नी हुँ जसले मेरो आध्यात्मिक जुत्ता, हेरू-राईफलाई जीवन दिनुभयो। एन्ड्रोइडिस मेर / राई''''ल (एटन वा एडोन) ले आफ्नो जीवनको भागलाई मिस्रको पवित्र मिट्टीमा ईश्वरीय न्याय पुनर्स्थापित गर्नेछन्। यो ईश्वरीय न्याय ध्रुवीयहरूको सन्तुलन हो।
हामीले लाखौँ वर्षौंका लागि काम गरेका छौं हाम्रो प्रेमका लागि। मेरो पति अस्सार / राप्फले यहूदियो-क्रिश्चियन युग पार गरेको छ। अब ती यी घटनाहरूको बाहिरी प्रमाण दिन सक्नुहुन्छ। ओरेगनसिंह, 9000 वर्ष पहिलेको पुन: जन्म, ग्रहीय हेराईको बीउ पुनर्जीवित भएको छ र आज हामी पुरस्कारहरू कटौती गर्दै हुनुहुन्छ। वास्तवमा, तपाईं 36 अगस्ट 15 (ब्रह्माण्ड काउन्टीडाउन) देखि छोटो 2008 महिना भन्दा कम छ जुन तपाईं 2012 अन्तको लागि नयाँ सभ्यताको कार्यक्रम तयार गर्न तयार हुनुहुन्छ।
तपाईं केहि कुरा बुझ्नुहुनेछ जुन म तपाईंलाई बताउन खोज्दैछु। म एक प्यारी छोरा भएको छ को पालनामा हिड्छु, वास्तवमा मेरो ब्रह्मांडिक पति, मेरो नर दु: ख को तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्न र के गरिरहेको छ को लागी तयार पार्नु हुन्छ।
युरान्टिया हिलिंग अफ ह्युमनकाइन्डबाट - प्रेमको महान् इतिहास - आईसिस निलो नेबडोनिया: नयाँ करार - अध्याय एक्सएनयूएमएक्स - ख्रीष्टको पुनरुत्थान फिर्ता पुग्यो प्राचीन मिस्र p.89
→ आईएसआई: मेरो बीचमा मेरो रिटर्न (परिचय)
→ आईएसई: इकाई को प्रतीक (अध्याय 1)
→ आईएसआई: के म हुँ (अध्याय 2)
→ आईएसआई: जीवनको दूतहरूको भूमिका (अध्याय 3)
→ आईएसआई: द एसोसिएट युनिटी र सन्स बेन्स (अध्याय 4)
isis नीलो नेबोडोनिया
© सबै अधिकार सुरक्षित www.polyvalent-art.com
तपाईले यस पाठलाई साझा गर्न सक्नुहुनेछ प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण लेखकको लागि, लेखक, स्रोतहरू र साइट उद्धरण गर्न: http://elishean-portesdutemps.com
प्रतिलिपि अधिकार ह्याटर © एलिसन / एक्सएनएक्सएक्स - 2009/ समयको ढोकामा
भगवान को हुनुहुन्छ, मोर्गन फ्रेमेन (भिडियो) संग
अफ्रीकामा परमेश्वरको नाम